Madaxweyne Muuse Biixi Oo La Saadaaliyey Inuu Ku Guulaysanayo Ictiraafka Somaliland | Biyoguurenews.com
Home Wararka Madaxweyne Muuse Biixi Oo La Saadaaliyey Inuu Ku Guulaysanayo Ictiraafka Somaliland
Madaxweyne Muuse Biixi Oo La Saadaaliyey Inuu Ku Guulaysanayo Ictiraafka Somaliland
Afhayeenka wasaarada waxbarashada iyo sayniska somaliland Cabdilaahi Ibraahin Xaaji Xasan ayaa saadaaliyey guulo uu gaadhayo madaxweyne Muuse Biixi.
Afhayeen Cabdilaahi Ibraahin Xaaji Xasan ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in madaxweyne Muuse Biixi uu ku guulaysan doono ictiraafka somaliland, waxanu qoraalkiisu u dhignaa sidan:-
Sooyaal iyo Saadaal dhab ah: Madaxweyne muuse oo la saadaaliyey inuu ku guulaystay Ictiraafka Somaliland
Waxa uu ka mid ahaa saraakiishii milateri ee SNM, gaar ahaan wuxuu ka mid ahaa hormuudkii ciidamadii 31kii May 1988kii soo galay Hargeysa. Wakhti kooban gudihii waxa geeriyooday in badan oo ka mid ahaa door roonayaashii ay isku faca ahaayeen. Hadal lama badiyee saymahaa iyo saxariirkaa Rabbi waa ka soo furtay oo ka soo badbaadiyay.
Goonni-isutaaggii Soomaalilaand iyo sal-udhigistii nidaamka dawladnimo ee qaranka ayuu kaalin shariifa ka soo qaatay. Aasaaskii axsaabta ayuu Sahan iyo Kulmiye oo uu aakhirkii madaxweynaha maanta ka soo gaadhay u kala danbeeyey. Sahal kuma uu iman kursiga madaxnimo, sahalna kagama tegi doono. Sida culimada taariikhdu qoreen, weligiiba waa la xaasidi jiray, aakhirka se Rabbi baa guusha siin jiray.
Sidii aan horeba sagaal bilood ka hor aan usadaaliyay una sheegay in doorashada uu isagu guulaysan doono isla markaana aan goob fagaare ah ugulasii dardaarmay. hoggaamintiisa Soomaalilaand way mahadin doontaa, waxaanu gaadhsiin doonaa heer ictiraaf.
Madaxweynaha beddeli doonaa waxa uu kala wareegi doonaa dal dunida ka mid ah insha allaah kaas noqon doona kii ugu danbeeyey ee dunida ku soo biira, isla markaana aqoonsi buuxa haysta. Sida culimada saadaashu faaqideen. Waxaa beddeli doona nin astaamo leh oo ay taariikh wadaagaan. Kaas oo laftiisu kifaax adag geli doona, aakhirkana noqon doona madaxweynii lixaad ee Soomaalilaand yeelato.ugu danbayn ilaahay haynagu simo dalkeena oo ictiraaf hela nabadana haynoo adkeeyo.
Cabdillaahi Ibraahim x. Xasan
Afhayeenka Wasaarada Waxbarashada
Previous articleFBI-da oo ku dheggan wiil Soomaali ah oo mar la shaqayn jiray
Next articleDAAWO;-Wafti Uu Hogaaminayo Wasiirka Biyaha Somaliland Oo Lagu Soo Dhaweeyay Magaalada Jig Jiga,